Ogaden News Agency (ONA) – Siminaaro Ilays TV ku qabteen Magaalada London Hoggaanka Warfaafintu soo diyaariyay
Ilaystv ayaa ku qabtay Siminaar saxaafadeed Studiaha Ilays ee magaalada London. Siminaaradan oo maanta bilowday waxaa kasoo qeybgalay masuliyiin uu kamid yahay Maxamed Macalin Axmed, Madaxa haayada Hanti dhowrka JWXO oo booqasho ku joogay wadanka UK.
Siminaarkan oo ay bixinayeen khuburo ku takhasus u heysta qaababka loo diyaariyo filimaata Documentrayga waxaa lagu bilaabay 10 xubnood oo takhasuskan gaarka ah qaadan doona muddo 4 todobaad ah barnaamijkan Axad kasta waxaa uu kasocon doona xarunta Ilays ee magaalada London.
Mudane Maxamed Macalin ayaa siminaaradan nasiib u yeeshay innuu kula kulmo howlwadeenka ilays tv ee tababaradan qaadanayay, isaga oo uga xog waramay baahida warbaahin ee ka jirta guud ahaan geeska Afrika iyo shacabka Ogadeniya sida ay ugu ooman yihiin suxufuyiin. Masuulka ayaa u mahad celiyay Hoggaanka warfaafinta JWXO oo joogteeyay siminaarada noocan oo kale ah. Isaga oo xusay Ilays TV kaalinta uu ka qaatay soo shaac saarida codka shacabka Ogadeniya.
Hada ka hor Siminaaro kan lamid ah waxay ku qabteen magaalada London kuwaas oo guulo laga gaadhay.